Doogee V20- ဈေးနှုန်းနှင့် ထွက်ရှိမည့်ရက်စွဲ | Gadget သတင်း
Ignatius ခန်းမ | 13/01/2022 08:56 | မိုဘိုင်း
အကြမ်းခံသောစမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအာရုံစိုက်သည့်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုမှာနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သူ Doogee ဖြစ်သည်။ အိတ်ဆောင်အားလုံးအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ကိရိယာများ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူအများအပြား၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ဤထုတ်လုပ်သူသည် terminal အသစ်ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာ Dodge V20ဤထုတ်လုပ်သူသည် သူ့ကိုယ်သူ နေရာယူလိုသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြမ်းခံသော စမတ်ဖုန်းကဏ္ဍတွင် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်း၏ခံနိုင်ရည်အတွက်သာမက ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် အကြမ်းခံသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရှာဖွေနေပြီး ထုတ်လုပ်သူ Doogee သည် ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသော အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ ဖြစ်ပါက သင့်အား ပြသပေးပါမည်။ Doogee V20 အသစ်၏ Specs များအားလုံး။
1 Doogee V20 ၏ Specifications များ
2 5G ပရိုဆက်ဆာ
3 AMOLED မျက်နှာပြင်
4 မည်သည့်အခြေအနေအတွက်မဆို ကင်မရာ ၃ လုံး
6 ၂ ရက်ဘက်ထရီ
7 Doogee V20 ၏အရောင်များ၊ ရရှိမှုနှင့်စျေးနှုန်း
Doogee V20 ၏ Specifications များ
Processor ကို 8G ချစ်ပ်နှင့်အတူ5Cores
RAM ကို 8 GB ကို LPDDR4x
သိုလှောင်မှု 266 GB UFS 2.2 - microSD ကတ်ဖြင့် 512 GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ပင်မမျက်နှာပြင် Samsung မှထုတ်လုပ်သော 6.4 လက်မ AMOLED - Resolution 2400 x 1080 - Ratio 20:9- 409 DPI - အလင်းအမှောင် 1: 80000 - 90 Hz
အလယ်တန်းပြသမှု 1.05 လက်မရှိသော ဓာတ်ပုံမော်လ်တာဘေးတွင် အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
နောက်ကင်မရာများ Artificial Intelligence - HDR - Night mode ပါရှိသည့် 64 MP ပင်မအာရုံခံကိရိယာ
20 MP ညအမြင်အာရုံခံကိရိယာ
8MP Ultra Wide Angle ဖြစ်ပါတယ်။
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 11
.ရာဝတီ IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
ရိုက်တယ်။íက 6.000 mAh - 33W အမြန်အားသွင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည် - 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
box ကို contents တွေကို 33W အားသွင်းကိရိယာ - USB-C အားသွင်းကြိုး - ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ - မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်
သင့်စမတ်ဖုန်းကို နှစ်စဉ် သက်တမ်းမတိုးပါက ဖြစ်နိုင်ချေကို စတင်စဉ်းစားသင့်သည်။ 5G မော်ဒယ်ကို ရွေးပါ။
စပိန်နှင့်ပြည်ပတွင် 5G ကွန်ရက်များ မရရှိနိုင်မီတွင် အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသော်လည်း Doogee V20 5G ကဲ့သို့သော စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရယူခြင်းက သင့်အား အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။နောင်နှစ်များအတွက် သင့်စက်ပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးအင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ခံစားလိုက်ပါ။.
Doogee V20 ကိုaက စီမံခန့်ခွဲသည်။ 8 core ပရိုဆက်ဆာ8 GB RAM အမျိုးအစား LPDDR4X နှင့်အတူ ဂိမ်းများနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ရန်။
သိုလှောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ယူရာတွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Doogee V20 နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတွင်ပါဝင်သောကြောင့်၊ နေရာလွတ် 256 GB UFS 2.2 အမျိုးအစား။ ပျက်သွားပါက၊ microSD ကတ်ဖြင့် နေရာလွတ်ကို အများဆုံး 512 GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
Doogee V20 တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ အန်းဒရွိုက် 11Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည့် မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Doogee V20 တွင်ရရှိနိုင်သော Android ဗားရှင်းတွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး စိတ်ကြိုက်အလွှာ၊ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများ တပ်ဆင်လေ့ရှိသည့် အပလီကေးရှင်းများကို ခံစားနေရပြီး ကိစ္စအများစုတွင် မည်သူမျှ အသုံးမပြုဘဲ ၎င်းထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ရနိုင်စေရန် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
OLED နည်းပညာပါသော မျက်နှာပြင်များ စျေးနှုန်းသည် ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ၊ လူတိုင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်သည့် အရည်အသွေးကို ခံစားချင်ကြသည်။ Doogee V20 တွင်aပါဝင်သည်။ Samsung မှ ထုတ်လုပ်သော AMOLED အမျိုးအစား မျက်နှာပြင် (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိုဘိုင်းစခရင်များ ထုတ်လုပ်သူ)။
မျက်နှာပြင်သည် 6,43 လက်မအထိရှိသည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 2400 × 1080 pixels၊ အလင်းအမှောင် 500 nits နှင့် 80000:1၊ ပစ်ဇယ်သိပ်သည်းဆ 409 နှင့် NTSC gamut တွင် အရောင်လွှမ်းခြုံမှု 105% တို့ ပါဝင်သည်။
ထို့အပြင်တစ် ဦး ရှိပါတယ် 90 Hz Refresh Rate. ဤမြင့်မားသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကြောင့်၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝဘ်ကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ ဂိမ်းနှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ပိုမိုချောမွေ့သော လမ်းကြောင်းပြမှုကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဤစက်ပစ္စည်း၏ ရှေ့မျက်နှာပြင် ဒီထဲမှာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အနောက်ဘက်တွင် ကင်မရာ module ၏ညာဘက်တွင် 1,05-လက်မ မျက်နှာပြင်ကိုလည်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်နှင့် ဘက်ထရီအား ပြသရန် ဤအသေးစားစခရင်ကို မတူညီသော နာရီဒီဇိုင်းများဖြင့် ပုံဖော်နိုင်သည်... ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်အတွက် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းအပြင်၊ သတိပေးချက်များနှင့် သတိပေးချက်များကို ကြည့်ရှုပါ။… သင့်စားပွဲပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်အောက်သို့ မျက်နှာမူထားသော ဖုန်းကို အများအားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ထားပါက၊ ဤစခရင်အမျိုးအစားသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မည်သည့်အခြေအနေအတွက်မဆို ကင်မရာ ၃ လုံး
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Doogee V20 ရဲ့နောက်ဘက်မှာ၊ တစ်ခုတွေ့တယ်။ ကင်မရာ ၃ လုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ module တစ်ခုအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တိုင်းလိုအပ်သမျှကို လက်တွေ့ကျကျ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကင်မရာများ...
64 အမတ်အဓိကအာရုံခံကိရိယာ ဉာဏ်ရည်တုနဲ့။ အလင်းဝင်ပေါက် f/1,8 နှင့် X optical zoom တို့ပါရှိသည်။
၏ကင်မရာ 20 MP ညအမြင်အာရုံ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အမှောင်ထဲတွင် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများရိုက်နိုင်စေသည် (၎င်းသည် မည်သည့်လုံခြုံရေးကင်မရာကဲ့သို့မဆို အလုပ်လုပ်သည်)။
8 အမတ် Ultra ကျယ်ပြန့်ထောင့် 130 ဒီဂရီ ရှုထောင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများ၊ လူအုပ်စုများ၊ အတွင်းခန်းများ ...
La Doogee V20 ၏ ရှေ့ကင်မရာ Resolution ကတော့ 16 MP ရှိပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တုန်လှုပ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အကြမ်းခံစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို သင်ရှာနေပါက၊ ခေတ်မီနည်းပညာကို လက်လွှတ်မခံဘဲ၊Doogee V20 သည် သင်ရှာဖွေနေသည့် စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Doogee V20 တွင် ပါ၀င်သည်သာမက၊ ပုံမှန် IP68 နှင့် IP69K လက်မှတ်များတပ်မတော်အဆင့် အောင်လက်မှတ်လည်း ပါဝင်ပြီး၊ MIL-STD-810
ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအတွင်းသို့ ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ရေများဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးပေးရုံသာမက၊ စက်ပစ္စည်းကို အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
Doogee V20 တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသော ဘက်ထရီသည် ရောက်ရှိသည်။ 6.000 mAh ဘက်ထရီဤစက်ပစ္စည်းကို ၂ ရက် သို့မဟုတ် ၃ ရက်အထိ ဆက်တိုက်ခံစားနိုင်စေမည့် စွမ်းရည်တစ်ခု။
ထို့အပြင်၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် 33W မြန်နှုန်းမြန်သည် USB-C ပေါက်မှတဆင့်။ ၎င်းသည် 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
Doogee V20 ၏အရောင်များ၊ ရရှိမှုနှင့်စျေးနှုန်း
Doogee V20 သည် ဖေဖော်ဝါရီလ 21 ရက်နေ့တွင် စျေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အရောင်3မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ နိုက်နက်, စပျစ်ရည်ကိုအနီ y Phantom မီးခိုးရောင် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် Matte finish အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။
မသန်စွမ်း Doogee V20 ၏ စျေးကွက်မိတ်ဆက်ပွဲကို ဂုဏ်ပြုပါ။ထုတ်လုပ်သူသည် ရောင်းရန် ကမ်းလှမ်းသည်။ ပထမဆုံး ယူနစ် 1.000 ကို $100 လျှော့စျေး ၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းအရ ၎င်း၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ 299 ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
El ဤ terminal ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းပရိုမိုးရှင်းပြီးတာနဲ့ 399 ဒေါ်လာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Doogee V20- ဈေးနှုန်းနှင့် ထွက်ရှိမည့်ရက်စွဲ